Ciidamo Hubeysan Oo Caawa la Wareegay Amniga Baladweyne.(Sawiro) AwdalMedia Awdal Media Ciidamo Hubeysan Oo Caawa la Wareegay Amniga Baladweyne.(Sawiro)
Ciidamo Hubeysan Oo Caawa la Wareegay Amniga Baladweyne.(Sawiro)
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya magaalada Balad-weyne ee gobolka Hiiraan ciidamo hubeysan ayaa caawa la wareegay qeybo a mid ah Magaaladaas, iyadoo xaalad kacsanaan ah ay halkaas ka jirto.
Ciidamadan oo la baxay (Badbaadada gobolka Hiiraan) ayay wararku sheegayaan iney ka soo horjeedaan booqasho la sheegay in maalinta beri ah uu magaalada Belad-weyne ku tagayo Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xusseen.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamadan ay la wareegeen xarunta Maamulka gobolka, Xerada Ciidamada DF ee Lama galaay iyo meelo kale.
Saraakiil ay ka mid yihiin Col. C/llaahi Barre Cilmi abaanduulihii hore ee Guutada shanaad qeybteeda 27aad ee ciidanka xoogga dalka iyo Nuur dheere oo ka mid ah saraakiisha ciidanka daraawiishta Hirshabelle.
Ujeedka ugu weyn ee ciidankan ayaa la sheegay tahay sidii ay u baajin lahaayeen Safarka Cali Guudlaawe oo gobolka Hiiraan si weyn Maamulkiisa looga diiddan yahay, lama soo sheegin wax iska horimaad ah balse xaalada magaalada ayaa kacsan, iyadoo laga cabsi qabo inuu iska horimaad dhexmaro ciidamada Hirshabelle ee taageersan Madaxweyne ku xigeenka maamulkaas iyo kuwa magaalada la wareegay.
“Coldoon Arrinkii Uu Sheegay wuu Cadaaday, Madaxweynuhuna…” Xildhibaan Maxamed Abiib